Onye Ọzụzụ Atụrụ German na-agwakọta: Nkịta Ezinaụlọ Kasị Mma nke Worldwa? - Dịrị
German Shepherd Lab Lab Mix: Ezigbo Ezinụlọ Ezinụlọ Familywa?
Onye German Shepherd Lab Mix bụ ihe na - eme mgbe ị gafere nkịta America na - esote, Labrador Retriever, ya na Onye Ọzụzụ Atụrụ German kachasị nwee ọgụgụ isi na ụwa?
Otu n'ime nkịta kachasị mma-enyi na enyi, otu ìgwè a na-eguzosi ike n'ihe, nwere ọgụgụ isi, na-egwu egwu ma na-egosi ndị nwe ya oke ịhụnanya na-akparaghị ókè. Nanị ihe ọ chọrọ bụ nloghachi bụ imerime mmega ahụ na-atọ ọchị.
Sheprador (nke a makwaara dị ka onye ọzụzụ atụrụ German Shepherd Labrador) bụ ọkara na nkịta buru ibu nwere nnukwu aja aja mara mma, yana ọdịiche dị na uwe mkpuchi site na ìhè ruo n'ọchịchịrị.
I tozuru? Ka anyị banye na ntuziaka ndị nwe anyị.
German Shepherd Lab Lab Nchịkọta Ama
Nzube Nkịta Ezinaụlọ
Adabara Na-apụ ma na-arụsi ọrụ ike ezinụlọ
Nha 22 ruo 26 ”(nwoke) ma ọ bụ 20 ruo 24” (nwaanyị)
Ibu ibu 45 - 95 lbs (nwoke) na 35 - 45 lbs (nwanyi)
Afọ ndụ Afọ 10 ruo 12
Agba dị iche iche Tan, aja, aja aja na oji
Iwe Ọgụgụ isi, ịhụnanya, igwu egwu, dị ike ma na-eguzosi ike n'ihe
Omume kwa ụbọchị Elu - Ọkacha mma 90 - 120 nkeji kwa ụbọchị
Nri Nri Kwa .bọchị Atọ na anọ iko nke elu àgwà akọrọ kibble kwa ụbọchị
Okwu Ahụike Ndị A Maara Dysplasia na gastric dilation volvulus (ebu)
German Shepherd Lab Lab Breed Overview
German Shepherd Lab Lab Ndị Puppy
Mmalite nke Sheprador
German Shepherd Mix Lab Temeperamnet na Àgwà
Etu esi elekọta German Lab Shepherd Lab
Nri na usoro choro
Zụ Ọzụzụ Ndị Ọzụzụ Atụrụ German
Onye Ọzụzụ Atụrụ German na-agwakọta
Na-edozi Ngwakọta Gị
Aha aha Sheprador ka enyere nkịta ndị nne na nna ya bụ ezigbo German Shepherd na Labrador Retriever
Abụọ n'ime ụwa kachasị ewu ewu na-agbakọta ma nye anyị ụdị nkịta ọhụụ. Otu mgbe obi ike, nwere ọgụgụ isi na Onye Ọzụzụ Atụrụ German siri ike di na nwunye nwere egwuri egwu, di ike ma dị oke ịhụnanya, Labrador .
Otu ọgbọ mbụ nke German Shepherd Lab Mix puppy, site na nne na nna ya dị ọcha na-azụlite German Shepherd na Labrador Retriever, ga-efu ihe dịka $ 200 na $ 600 USD.
Sheprador abụghị ụdị dị oke ọnụ n'ihi na ha ka na-amatakarị ewu ewu dị ka ụdị nkịta ndị ọzọ na-emepụta ụdị dịka Cavachon nke dị oke ọnụ ma dị obere .
Ọnụahịa nke ụdị a ga-adịgasị iche site na onye na-azụ ya na onye na-azụ ya mana ọ dị mma ịsị na ahụike ndị nne na nna na-adị, ka nwa puru ọnụ.
Ngwurugwu ọ bụla nwere ike ịdị iche na nne ma ọ bụ nna na-achịkwa ọdịdị. Ogologo ahihia di iche site na isii rue puppy puppy na nkezi.
Enweghi ụbọchị e setịpụrụ maka oge na ebe mbụ a zụrụ azụkọ a. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na Onye Ọzụzụ Atụrụ German na Labrador Retriever bụ ụdị ewu ewu mgbe ahụ ha nwere ike ịbụ na ha anọwo nwa oge.
Onye Ọzụzụ Atụrụ German bụ otu n'ime nkịta ndị kasị ewu ewu n'ụwa . Ha sitere na nkịta na-arụ ọrụ na Germany na 1899.
Labrador Retriever bụkwa ụdị ewu ewu zuru ụwa ọnụ ma bido n'etiti etiti 1830 na Newfoundland nke dị na United Kingdom.
Taa, ụdị abụọ a ma ama maka ọdịdị ọgụgụ isi ha na iguzosi ike n'ihe ha ma na-ezu ohi abụọ kachasị elu maka ụdị nkịta kachasị ewu ewu n'ụwa.
Okwu anọ: nkịta ezinụlọ zuru oke.
Enwere ike ikwu, hoo haa na ụdị ngwakọta a zuru oke maka ezinụlọ ọ bụla. Ha bụ ezigbo ndị enyi, ndị na-eguzosi ike n'ihe na ndị na-ahụ n'anya. Ọ bụrụhaala na a zụrụ ha, na-emega ahụ ma na-emekọ ihe n'ụzọ ziri ezi, mgbe ahụ ị gaghị enwe nsogbu na canine a na-ahụ n'anya.
Ihere gbara otu n'ime ụdị nne na nna gburugburu, Onye Ọzụzụ Atụrụ German, site na ha ji nkịta ndị agha n'oge Agha Worldwa nke Abụọ. Àgwà omume nke iwe na-ejikọta ya na GSD. Agbanyeghị, ọ bụ ezie na nchekwa na ọdịdị, ụdị a bụ nkịta na-eme ihe ike .
Ọ bụrụ na a zụlitere na gburugburu ebe obibi dị mma, ma nwee mmekọrịta chiri anya, mgbe ahụ pup ga-egosi n'ozuzu enweghị ihe ịrịba ama nke iwe . Enwere ike ikwu otu ihe maka German Shepherd Lab Mix.
Ha di egwu na umuaka n'ihi egwu na ume ha. Agbanyeghị, nke a abụghị ezi nkịta maka ezinụlọ dị umengwụ ma ọ bụ onye nwe ya; ha chọrọ ọrụ zuru oke nke ọrụ kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ha enwetaghị mkpali kwesịrị ekwesị, na mmega ahụ, mgbe ahụ ha ga-abụ ndị na-agwụ ike ma na-ebibi gburugburu ụlọ. Yabụ ọ bụrụ na ị dị umengwụ, ma ọ bụ na ị naghị enwekarị ụlọ, wee tụlee ịlaghachi na mpaghara agha ma kpochapụ sofa.
Ha bụ ụdị ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi wee jide n'aka na ị na-emeso ha dị ka otu. Tụba ụfọdụ cuddle ka ị nọ na ya. Vinghụnanya na ọgụgụ isi ụdị a bụ ezigbo mgbakwunye na ezinụlọ ọ bụla.
Gị German Onye Ọzụzụ Atụrụ Lab Lab nwere ike dị nnọọ n'anya nri dị ka ha ga-ahụ gị n'anya. Nkịta buru ibu ma na-arụsi ọrụ ike nwere nnukwu agụụ mgbe niile ka ị kwadebe.
Ego ole ka Sheprador na-eri?
Ná nkezi, nkịta buru ibu, nke siri ike ma na-arụsi ọrụ ike chọrọ calorie 30 kwa paụnd nke ịdị arọ ahụ kwa ụbọchị. N'ihi na nke a cross ìgwè ga-eri abụọ na atọ iko nke elu àgwà akọrọ kibble kwa ụbọchị. Enwere ike ịgbakọ nke a site na iji tebụl dị n'okpuru:
Nwanyi 35 - 45 n'arọ 1050 - calorie 1350
Nwoke 45 - 95 n'arọ 1350 - 2850 calorie
Dịka ị pụrụ ịhụ, nwoke German Shepherd Mix Lab na-achọ calorie karịa nke nwanyị n'ihi ọdịiche ha na nha. Agbanyeghị, ọ dị mkpa icheta na ọbụlagodi ụmụ nwoke ga-adị iche nha, yabụ ekwesịrị ịgbanwe ego ha calorie ka ọ dị. Nke a bụkwa eziokwu n'oge nwa nkita na uto ha .
Tụkwasị na nke a, ihe ndị chọrọ kalori nke pup gị nwere ike gbanwee na nzaghachi maka ọdịiche dị na afọ ha, ogo na ogo ọrụ ha.
E nwere ụdị nke dị elu akọrọ kibble nke emere kpọmkwem maka ụdị nkịta buru ibu. Emebere nri ndị a ka ha nwee ezigbo protein na abụba nke nnukwu nkịta gị chọrọ ka ịchekwa ọnụ ọgụgụ ha siri ike.
Ekwesiri igbasa nri rue otutu nri enyemaka ziri ezi mgbaze , ma belata Ohere onu mmiri .
Enwere ike ịkekọrịta nri abụọ n'ime nri ụtụtụ na nri abalị. Chee maka ya dika ugwo mgbe emechara mmega ahu na ike gi niile.
Ikwu okwu banyere ugwo oru, obu ezie na onwere ike inwa gi ike inye umu akwukwo nri gi na mmuta ha; biko emela.
Otu nne na nna dị ọcha, nke Labrador, na-adịkarị mfe ibu ibu na oke ibu ma ya mere ọ dị mkpa na ụdị a agaghị eju afọ; arapara n'ahụ nri siri ike .
Ná nkezi, Sheprador chọrọ opekempe otu awa kwa ụbọchị; ụbọchị ụfọdụ na-anụ ụtọ oge ole na ole.
Imega Onye Ọzụzụ Atụrụ German na Lab Mix kwesịrị ịgụnye ọtụtụ ịgba ọsọ na egwuregwu siri ike. Inwe okirikiri na mbara mbara saa mbara bara uru. Ọ bụrụ na nke a adịghị gị mma, gịnị kpatara na ị gaghị eme nwa pup gị ka ọ bụrụ onye ọlụlụ ọhụrụ gị?
Gbalịa were nkịta gị maka ụfọdụ egwuregwu gafere n'akụkụ osimiri ma ọ bụ ogige mpaghara gị, ma ọ bụ gịnị ma ị kwụsị na ogige ahụ mgbe ị gachara ọrụ? Ma nkịta gị ma ụmụ gị ga-enweta oge egwuregwu ha chọrọ nke ọma iji gbaa ume ha niile ọkụ iji hụ na udo dị jụụ na mgbatị kwesịrị ekwesị site na ọkụ.
Na-enweghị mmega ahụ kwesịrị ekwesị, nkịta gị nwere ike izu ike ma gwụ ya ike na njọ, umengwụ na oke ibu; nke ga- belata àgwà nke ndụ ha .
Zụ nkịta ọ bụla adịghị mfe, Otú ọ dị, ngwakọta a na-emepụta ga-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe ka ma Onye Ọzụzụ Atụrụ German ma Labrador nwere ọgụgụ isi ma na-arụsi ọrụ ike nke na-achọ ime ihe na-atọ ụtọ.
Ihe niile ị chọrọ ịzụ nkịta gị bụ gị na ezigbo nkwalite dị mma. Ma n'ezie, nkịta gị kwa. dominance dabere na ọzụzụ enweela akwụ ụgwọ ma yabụ na ekwesịghị iji ya.
Nyeghachi nkịta gị ụgwọ n'oge omume dị mma site na ọgwụgwọ, ịhụnanya ma ọ bụ ihe egwuregwu. Ọ dị gị n'aka ikpebi ụdị ụgwọ ọrụ nkịta gị na-anabata. I nwekwara ike nwalee nke a kwa .
Ihe ị ga - eji zụọ nkịta gị bụ ịgwakọta mkpali nke uche na imega ahụ ọnụ. Nke a ga - eme ka nkịta gị kwụsie ike ma mụrụ anya na usoro mmụta ga - eme ka oge ọzụzụ bụrụ oge egwuregwu ọzọ.
Ezigbo echiche maka mkpali nke ọgụgụ isi
Ọ ga-adị mma ma anyị jiri egwuregwu ụfọdụ na-atọ ọchị, na-emekọ ihe ọnụ. A nanị egwuregwu nke ozi kpọtara ga eme nkari.
Nanị pụọ ma zụta nwa gị nkịta enyi na enyi, tụba bọọlụ ahụ, ma lelee egwu ka ha na-agba ọsọ iji nweta bọọlụ ahụ; ikwugharị!
Enwere ike inye mkpali nke uche n'ụzọ dị iche iche karịa ka ị chere. Can nwere ike ọzọ ụzọ na-agba ọsọ / na-eje ije ụzọ gasị, were ha ọhụrụ na-amaghị ebe na-ekiri ka ha ji obi ụtọ na-ọhụrụ gburugburu ebe obibi niile na.
Otu n'ime nkịta a
Mmekọrịta nke ìgwè a dị ezigbo mkpa, ọkachasị n'ihi ọdịdị nchekwa nke nne na nna Onye Ọzụzụ Atụrụ German. Maka nke a, mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịkwa mkpa maka nwa gị. Ngwakọta gị kwesịrị iji zute ndị ọhụụ site na nwata ka ha wee ghara inwe nrụgide na gburugburu mgbanwe. Nke a ga - enyere gị Sheprador aka ịbụ okenye na onye a zụrụ nke ọma.
Ngwakọta gị ga-enwe afọ ndụ nke afọ 10 ruo 12 na nkezi. Ọ bụ ezie na a na-azụkarị nkịta ndị na-emepụta ihe iji mepụta ụdị ngwakọta zuru oke na obere nsogbu ahụ ike, ha nwere ike ịbụ na ọ dị nwute na ha ga-eketa. A mara ụlọ nyocha German Shepherd Mix Lab na Dysplasia na Bloat na-ata ahụhụ.
Ọrịa Cancer Dysplasia
A nke ukwuu ọrịa ọkpụkpụ ọkpụkpụ nkịtị dị na Ndị Ọzụzụ Atụrụ German; nke bụ otu n'ime ihe kpatara ya na Shiloh Onye-ozuzu aturu bred. Ọ bụ nkwarụ nke nkwonkwo nkịta nke nwere ike ịkpata mgbu na mbufụt.
Ọrịa Cancer dysplasia nwere ike ịmalite na mbido ma ọ bụ okenye. Ọ bụrụ na ahapụghị ya, pup gị ga-enwe nnukwu ihe mgbu na ọ nwere ike ịchọ ọgwụgwọ.
Gastric Dilation Volvulus (ya bụ Bloat)
Bloat na-apụta mgbe afo canine na-aza azịza maka nnukwu nri. Kama ịchụpụ gas ahụ n'ụzọ nkịtị, ọ na - ejide ya, nrụgide na - ewulite ma na - akpata ihe mgbu. Dika Labradors di obi miri emi, ha nwere ike iguzo. Ọ dị mkpa na ha ijide n'aka na nwa gị anaghị eri nri ha ngwa ngwa. Y’oburu n’ichoputa nwa ogwu gi n’enweghi nsogbu, egbula oge igwa ndi Veterinarian gi.
Ekwela ka nnukwu nha ha tụọ gị egwu, ụdị a bụ gigy softy!
Nkịta gị nwere ike ibu ibu dị ka Onye Ọzụzụ Atụrụ German, ma ọ bụ ọ nwere ike ịdị ka ụlọ Labrador. Otu nwanyị ga-atụle ebe ọ bụla site na 35 ruo 45 pound na ụmụ nwoke na-adịkarị ibu site na 45 ruo 90 pound. Ogologo nke akpọnwụ ha na-abụkarị sentimita 20 ruo 26.
N'ịbụ nke a na-akpọ dị ka onye na-ajụ ọkara nke nkịta buru ibu, na-atụle site na 35 ruo 95 pound, nkịta gị ga-enwe ọkara na-ogologo ogologo na osisi siri ike na nke siri ike.
Obere, anya na nti dị ka nke Onye Ọzụzụ Atụrụ German, ma ọ bụ ntị dị nro ma na-ada ada dị ka nke Labrador. Ọdịdị nke ụlọ ọrụ ọzụzụ atụrụ German Shepherd Lab gị ga-adịgasị iche iche nke ukwuu site na pup ka pup na enweghị ike ịkọ ya.
Dị ka nke a bụ onye mmebe nkịta , enweghị ụdị izu maka nkịta a; ọdịdị ahụ nwere ike ịdị ka Onye Ọzụzụ Atụrụ German ma ọ bụ Labrador.
Anya ha ga-agbaze ọbụna oyi nke obi. Nnukwu na agba aja aja, o doro anya na ha siri ike ịghara ịhụ n'anya!
Lablọ nyocha German German Shepherd nwere mkpụmkpụ, uwe elu abụọ, nwere agba sitere na tan na aja aja ruo aja na ọbụnadị ojii ( site na GSD ojii ).
Bredị nne na nna wụsara ọtụtụ ntutu; akpan akpan ke ini utọ ye iduọ. N'oge a, nwa gị na-akwadebe akwa ya na oge oyi ya.
Roomchịkwa nkịta gị mgbe niile ga-enyere aka belata ntutu nkịta ọ bụla achọghị ka ọ gbakọta n'ụlọ. Iji belata ịwụfu oke, gbalịa ịchacha nkịta gị ugboro abụọ ma ọ bụ karịa kwa izu. A na-atụ aro ka ịmalite brọsh gị nwa gị mgbe ị dị obere.
Gbalịa ịsa nkịta gị kwa ọnwa, enwere ike iji ncha ntutu eji arụ ụlọ . A na-atụ aro mkpịsị aka ntu mgbe niile. Ọzọkwa, echefula ezé nkịta gị. Gbalịa na-ehicha ha kwa ụbọchị ma ọ bụ nanị nye ha ọgwụgwọ eze.
Yabụ, ụmụ gị amalitelarịrị ịrịọ gị maka German Shepherd Lab Mix?
Otu nkịta nwere ọgụgụ isi, dị mfe ọzụzụ, egwuregwu na-eguzosi ike n'ihe ma na-eguzosi ike n'ihe nwere ụdị nchebe. Nke a bụ ihe mgbakwunye zuru oke maka ezinụlọ gị na ụmụ gị.
Y’oburu n’inwe oke azu ulo, ezinulo ike, na otutu ihunanya inye mgbe ahu ka German Shepherd Labrador Cross dika nkpuru ahihia zuru oke.
Onye zuru oke na-agba ọsọ, nwa na-atụgharị uche na onye ezinụlọ. Ikwu n'okpuru ma gwa anyị akụkọ na-enye obi ụtọ banyere gị na Onye Ọzụzụ Atụrụ German Labrador Cross.
Nkịta Nkịta: 7 Ihe You Na-amaghi Banyere Ihe Mere Nkịta ji agbasa
Gịnị kpatara Nkịta ji achọ ọkpa? Sayensị Na-akpata Nkịta Ọkụ
onye ọzụzụ atụrụ German na -acha uhie uhie
German onye ọzụzụ atụrụ odo lab mix
nwa agbọghọ dị jụụ nkịta aha pitbulls
aha nkịta nwa agbọghọ maka ụlọ nyocha chocolate
Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia heeler mix puppies